Home Wararka Abiy Axmad iyo Isaias Afwerki oo sheegay in mooshinka Farmaajo in uu...
Abiy Axmad iyo Isaias Afwerki oo sheegay in mooshinka Farmaajo in uu caqabad ku yahay danahooda
Abiy Axmad ayaa shalay ka sheegay magaalada Addis Ababa in mooshinka laga soo sheegayo Soomaaliya uu caqabad ku yahay danaha ay ka leeyihiin dalka Soomaaliya. Labada hogaamiye ee Itoobiya iyo Eriteteeya ayaa u muuqda kuwa difaacayo danahooda gaarka ah. Abiy Axmad aya ayiri “ hadii Farmaajo uu ku baxo Mooshinka waxaa naga lumayo shaqsi aanu u aragno in uu nagala shaqeynayo danaha aanu ka leenahay Soomaaliya”.
Mid ka mida aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqadishu ayaa sheegay in ujeedada Itoobiya iyo Eritereeya ay tahay in ay isticmaalaan Farmaajo si ay danahooda uga gaaraan Soomaaliya. Ali Nur (Janaale) ayaa yiri “ labadaa dal waxa ay heleen shaqsi ay isticmaalaan ama oo ay ku shaqeeystaan oo laciif ah waxaana ay jeclaan lahaayeen in Farmaajo u joogo si ay ugu shaqeeystaan, laakiin go’aanka Farmaajo ku joogayo ama ku baxayo waa mid u yaalo baarlamaanka Soomaaliya”.
Labada dal ayaa waxa damac kaga jiraa in ay ciidan hor leh keenaan Soomaaliya si loogu difaaco Farmaajo laakiin waxaan shaki ku jirin in arintaan dib u soo noolayn doonto muqawamadii lagula dagaalay ciidanka Itoobiya sanadkii 1995-8.
Previous articleShacabka ku nool magaalada Baydhabo oo amaro la dul-dhigay
Next articleKulamo xasaasi ah oo ka socda Garoowe iyo Musharaxiinta oo la kulmeeysa